❤️ Shopping IGTV hadda waa laga heli karaa Instagram - Winches Club
Instagram ayaa ku dhawaaqday horaantii bishaan in dukaamaysiga IGTV uu hadda yahay mid caalami ah.
Guusha weyn ee muujinta dukaamaysigu waxay timaaddaa ka dib wararka wararka, sheekooyinka iyo farriimaha tooska ah waxaa adeegsaday ganacsato iyo milkiileyaal summad leh.
Instagram ayaa warisay in ku dhawaad ​​130 milyan oo qof ay daawadaan goobaha wax iibsiga bishii kasta.
Marka la eego tirooyinkan, waxay samaysay dareen kaamil ah Instagram bilaw hawsha dukaamaysiga ee IGTV.
Ujeeddada asalka ah ee shaqeynta dukaanku waxay ahayd in laga caawiyo ganacsiyada inay sii koraan iyo, ka yimid Instagram, 60% isticmaalayaashu waxay qiraan sahaminta iyo ka helista alaabada cusub ee Instagram.
Haddii aadan weli abuurin dukaankaaga Instagram, waxaan kugula talineynaa inaad sameyso. Arrimuhu si dhakhso ah ayay isu beddelaan, iyo muujinta dukaanku waxay aad ugu dhufatay suuqgeeyayaasha Insta.
Waxay adeeg weyn u ahaayeen adeegsadayaasha iyaga oo ka caawiyay inay gaaraan dhagaystayaashooda hab ku habboon oo hufan..
Cusboonaysiinta deg -degga ah ee Instagram iyo isbeddelada ayaa xaqiijinaya inay sii hayaan isticmaaleyaashooda. Markaas, hubi inaad qayb ka tahay oo ku soo jiid dhagaystayaashaada dukaamaysiga IGTV.
Haddii aad u adeegsato IGTV Shopping -ka astaantaada?
Dukaameysiga IGTV waa fursad xiiso leh oo saameeyayaasha iyo hal -abuurayaasha adeegsada barnaamijyadooda si ay ula xiriiraan dhagaystayaashooda, si aad u kasbato lacag dheeraad ah dadaal la'aan.
Dukaameysiga IGTV wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ku dhejiso badeecadaha aad ka hadlayso fiidyowyadaada, si toos ah fiidiyowyadan.
Shaqayntani waxay la mid tahay tan u oggolaanaysa in qof lagu sawiro sawir., laakiin ku calaamadee badeecad halkii.
Hore, adeegsadayaashu waxay ku koobnaayeen sida ay u xayeysiin karaan badeecadaha ay ku xayeysiinayaan fiidiyowyadooda.
Waad ku mahadsan tahay suurtogalnimada sumadeynta alaabada, mar dambe uma baahnid inaad ka tagto xiriiro badan cinwaannada fiidiyowyadaada.
Qalab kale oo awood leh waa hawl -hayaha khasnajiga, laakiin hadda waxaa laga heli karaa oo keliya Maraykanka. Marka ay tahay mid caalami ah, arrimuhu way is beddeli doonaan weligood.
Awoodda aad ku arki karto badeecad, taabashada si aad wax uga iibsato ugana baxdo Insta waxay beddeli doontaa sida dadku u isticmaalaan Insta si ay wax uga iibsadaan.
Dhab ahaan, 70% dukaamaystayaashu waxay ku noqdaan Instagram-ka si ay u eegaan alaabada cusub.
Wax badan ayaa isbedelay bilihii la soo dhaafay, waana inaad hubisaa inaad adeegsato dhammaan astaamaha hadda laga heli karo gobolkaaga si aad ugu badiso guushaada.
Mustaqbalka dukaamaysiga IGTV
Dukaameysiga IGTV ayaa loo qorsheeyay inuu bato waxaana laga yaabaa inuu noqdo habka ugu wanaagsan ee lagu soo jiito macaamiishaada.
Waad ku mahadsan tahay qaabka fiidiyaha, si ay u dhawaaqaan iyo hadda si subtitles, nuxurkaagu waa mid la heli karo si ka badan sidii hore. In badan oo la heli karo waxa ku jira, dhagaystayaashaadu way badnaan doonaan. Tani waa suuqgeyn dhan sharafteeda.
Inta lagu jiro masiibada, Instagram ayaa aad ugu dheeraatay soo saarista astaamo cusub sida shaqada dukaanka, lambarka QR iyo hadda Shopping IGTV.
Ujeeddadooda ugu weyni waxay ahayd inay caawiyaan shirkadaha, calaamadaha, saameeyayaasha iyo shaqsiyaadka si ay u gaaraan awoodooda ugu badan.
Runtii waa inaad waqtigan ku qaadataa inaad dib uga fikirto oo aad dib u qaabayso xeeladaha suuqgeynta adiga oo ka faa'iideysanaya astaamo kasta oo ay bixiyaan..
Sida loo qabsado dhagaystayaashaada fiidyowyo
Haddii aad rabto inaad sida ugu badan uga faa'iidaysato dukaamaysiga IGTV, marka hore waxaad u baahan tahay inaad hubiso inaad kula xiriiri karto dhagaystayaashaada fiidyowyo.
Fiidiyowyadu waxay noqon karaan hab awood badan oo sahlan si loo kobciyo joogitaankaaga Insta, waxay kuxirantahay sida aad ula xiriiri karto oo aad si qoto dheer uga qeyb qaadan karto dhagaystayaashaada.
Fiidiyowyadu waxay muujinayaan daacadnimadaada waxaana si fudud loogu isticmaali karaa in lagu wadaago sheekadaada astaanta. Kaliya maahan inaad siiso daaqad khibradaada, laakiin dhagaystayaashaadu sidoo kale waxay dareemi karaan xiisaha aad u qabto waxaad u adeegto.
Waxaa jira siyaabo badan oo loola macaamilo dhagaystayaashaada, tusaale ahaan:
• Muuji sifooyinka alaabta
• Soo bandhig alaab cusub
• Waxyaabaha gaarka ah ka hor inta aan la bilaabin badeecada
• Ujeedooyin waxbarasho awgeed
• Kulamada tababarka
Raac tilmaamaha hoose ee ku saabsan sida fiidiyowga loo soo rogo oo aad maanta u bilowdo inaad la wadaagto sheekadaada taageerayaashaada..
Maqaal horeSida Loo Helo Muuqaallada Tik Tok – Tilmaan Wacan
Maqaalka XigaWax walba oo ku saabsan hubinta barta Instagram